Yese dubaa no trenee ahenni (1-10)
Pataku ne oguan ba bɛbom atena (6)
Yehowa ho nimdeɛ bɛyɛ asaase so ma (9)
Wɔbɛsan de nkaefo bi aba (11-16)
11 Dubaa+ bi befifi Yese dunsin mu,+Na dua foforo bi bɛfefɛw+ afi ne ntini mu asow aba. 2 Na Yehowa honhom bɛtena no so,+Nyansa+ ne ntease honhom,Afotu ne tumi honhom,+Nimdeɛ ne Yehowa suro honhom. 3 Na Yehowa suro bɛyɛ no anigye.+ Ɛnyɛ nea n’ani hu na obegyina so abu atɛn,Na ɛnyɛ nea n’aso te kɛkɛ na obegyina so anya obi kasakyerɛ.+ 4 Obebu atɛn turodoo* ama ahiafo,Na ɔde trenee ayi ntɛn ama asaase so ahobrɛasefo. Ɔde n’anom abaa bɛbɔ asaase no,+Na ɔde n’anom ahome* akum abɔnefo.+ 5 Trenee bɛyɛ abɔso abɔ ne sisi,Na nokwaredi ayɛ abɔso wɔ n’asen.+ 6 Pataku ne oguan ba bɛtena,*+Na ɔsebɔ ne apɔnkye ba ada faako,Na nantwi ba ne gyata* ne aboa a wadɔ srade bɛbom atena faako;*+Na abarimaa ketewaa aka wɔn. 7 Nantwibere ne osisi bɛbom adidi,Na wɔn mma ada faako. Gyata bɛwe wura sɛ nantwinini.+ 8 Abofra a otua nufu ano begoru ɔprammiri amoa ano,Na abofra a watwa nufu de ne nsa aka ahurutoa* bɔn. 9 Wɔrenyɛ bɔne+Na wɔrensɛe ade bio wɔ me bepɔw kronkron no nyinaa so,+Efisɛ Yehowa ho nimdeɛ bɛyɛ asaase so ma Sɛnea nsu kata po so no.+ 10 Saa da no, Yese ntini+ bɛsɔre agyina sɛ ahyɛnsode* ama aman no.+ Ne hɔ na amanaman bɛhwehwɛ akwankyerɛ,*+Na ne homebea benya anuonyam. 11 Saa da no, Yehowa bɛsan ateɛ ne nsa, ne mprenu so, de agye ne man nkaefo afi Asiria,+ Egypt,+ Patros,+ Kus,+ Elam,+ Sinar,* Hamat, ne po so nsupɔw+ so. 12 Ɔbɛma ahyɛnsode* bi so ama aman no na waboaboa Israelfo a wɔahwete no ano,+ na ɔbɛboaboa Yudafo a wɔahwete no ano afi asaase afanan nyinaa.+ 13 Efraim ahoɔyaw befi hɔ,+Na wɔn a wɔtan Yuda no, wobeyi wɔn afi hɔ. Efraim ani remmere Yuda,Na Yuda nso rentan Efraim.+ 14 Wobetu fãã akosi Filistifo nkoko* so wɔ atɔe;Wɔbɛbom afom Apueifo nneɛma. Wɔbɛteɛ wɔn nsa wɔ Edom ne Moab so,*+Na Ammonfo abɛhyɛ wɔn ase.+ 15 Egypt po no fã a adidi kɔ asaase mu* no, Yehowa bɛkyɛ mu,*+Na obehim ne nsa wɔ Asubɔnten no*+ so. Ɔde ne home* hyehyeehyew no bɛbɔ n’asuten ason no,*Na wama nnipa de wɔn mpaboa anantew atwa. 16 Na ɔkwantempɔn+ bi befi Asiria abɛda hɔ ama ne man nkaefo a wɔaka no,+Sɛnea ebi bɛdaa hɔ maa Israel ɛda a ofii Egypt asaase so no.
^ Anaa “atɛntrenee.”
^ Anaa “honhom.”
^ Kyerɛ sɛ, wobehyiam bere ne bere mu.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Na nantwi ba ne gyata bedidi abom.”
^ Anaa “Amanaman bɛhwehwɛ n’akyi kwan.”
^ Nt., “abati.”
^ Anaa “Wobedi Edom ne Moab so.”
^ Nt., “Egypt po no tɛkrɛma.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “bɛma ayow.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “bɛkyɛ n’asuten no mu ason.”